Jurgen Klopp oo kooxdiisa Liverpool ka dalbaday inay rikoorkooda suuqa kala iibsiga u jebiyaan xiddigan – Gool FM
(Liverpool) 20 Dis 2021. Tababaraha kooxda Liverpool ayaa u oomman ku guuleysiga tartammo hor leh isagoo maamulka naadigiisa ka dalbanaya inay sameeyaan saxiixyo waaweyn suuqyada soo aaddan, waxaana ka mid ah xiddigaha uu ka dalbaday laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Jude Bellingham.
18-sano jirkan ayaa qaab-ciyaareed heer sare ah kusoo bandhigay horyaalka Bundesliga kaasoo u kasbaday inuu boos joogto ah ka helo kooxdiisa Dortmund iyo xulka qaranka England, waxaana uu sidoo kale xiiso ka helayaa qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Chelsea, Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, Juventus, Paris Sain-Germain iyo Real Madrid oo dhammaantood lala xiriirinayo.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska dhowaanahan suuqa kala iibsiga wax ka qora ee El Nacional ayaa baahiyay inuu Macallin Klopp maamulka kooxda Reds ku cadaadinayo inay u dhaqaaqaan saxiixa Bellingham xagaaga soo aaddan, waxaana uu wargeyska intaas ku daray inay kooxda Jarmalka ka dhisan xiddigan ku iibineyso 100 milyan oo euro.
Klopp oo hore usoo maamulay Dortmund ayaa doonaya inuu kooxdiisa ka xoojiyo khadka dhexe kaddib bixitaankii Gioginio Wijnaldum ee xagaagii hore isagoo sidoo kale ka gaashaamanaya da’da 30-maadka ee ay ku jiraan Kabtan Jordan Henderson, Thiago Alcantara iyo James Milner kuwaasoo dhammaantood khadka dhexe ka ciyaara.
Mino Raiola oo markale ka hadlay mustaqbalka Haaland isagoo markan ka dhawaajiyay hadal farxad gelinaya Barcelona